थाहा खबर: २० शाखा विस्तार गर्न ६ महिना, सबै स्थानीय तहमा कहिले पुग्लान् बैंक?
२० शाखा विस्तार गर्न ६ महिना, सबै स्थानीय तहमा कहिले पुग्लान् बैंक?
२९२ मा प्रतिवद्धता, १०९ मा नसक्ने
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सबै स्थानीय तहमा शाखा खोलिसक्नका लागि आफ्नो मौद्रिक नीतिमार्फत निर्देशन दिएको छ। तर, पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा पहिले नपुगेका जम्मा २० वटा स्थानीय तहमा मात्रै शाखा विस्तार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।
२०७३ चैतमा सरकारले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा बैंकको शाखा पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएपछि राष्ट्र बैंकले यथाशीध्र शाखा स्थापना गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, राष्ट्र बैंकको यो निर्देशन चालु आर्थिक वर्षमा पालना नहुने पक्का देखिएको छ।
सबै स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्नका लागि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरूलाई पुन: निर्देशन दिएको छ। हालसम्म ७५३ मध्ये जम्मा ३५२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगेका छन्, जबकि गत साउनसम्म ३३२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगिसकेका थिए।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी कारोवारका लागि वाणिज्य बैंक नै हुनुपर्छ। त्यसैले स्थानीय तहको कारोवारमा वाणिज्य बैंक अनिवार्य छ
२९२ स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने प्रतिवद्धता आएको छ भने १०९ स्थानीय तहमा खोल्न सक्दैनौँ भन्ने जवाफ राष्ट्र बैंकमा आएको छ अर्थात् खोल्ने प्रतिवद्धता छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले थप १०९ स्थानीय तहमा शाखा विस्तारका लागि भने थप कडाइ गरेको छ। त्यो हो, १०९ मध्ये कुनै २ वटामा शाखा नखोलेमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा शाखा खोल्न पाइनेछैन।
'प्रतिवद्धता प्राप्त हुन बाँकी रहेका १०९ वटा स्थानीय तहमध्ये कुनै २ तहमा शाखा खोलेमा मात्र बैंकहरूलाई काठमाडौं महानगरपालिका तथा ललितपुर महानगरपालिकाभित्र एउटा शाखा खोल्न दिने व्यवस्था गरिनेछ', राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ।
राष्ट्र बैंकले शाखा विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउनका लागि बैंकलाई थप सुविधा पनि दिएको छ, जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा शाखा विस्तार गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति चाहिँदैन।
गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकले शाखा खोलेपछि त्यस स्थानमा ३ वर्षसम्म अर्को कुनै बैंकले शाखा खोल्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यस्तै, बैंकलाई शाखा खोल्नका लागि प्रति शाखा १ करोड रुपैयाँ १ वर्षका लागि निर्ब्याजी सापटी प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
वाणिज्य बैंकमा कुन प्रदेशको पहुँच कति?
अहिलेसम्म झण्डै ५४ प्रतिशत स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छैनन्। प्रदेश ६ मा सबैभन्दा कम शाखा छन् भने प्रदेश ५ मा सबैभन्दा बढी शाखा देखिएको छ। यसअनुसार प्रदेश ६ मा ३० प्रतिशत स्थानीय तहमा बैंकको उपस्थिति देखिन्छ भने प्रदेशमा ५ मा ६० प्रतिशत स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा रहेका छन्।
बैंकका शाखा पुगेको तह
शाखा नहुँदा स्थानीय तहलाई परेको समस्या?
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी कारोवारका लागि वाणिज्य बैंक नै हुनुपर्छ। त्यसैले स्थानीय तहको कारोवारमा वाणिज्य बैंक अनिवार्य छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट वक्तव्यमार्फत हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा बैंक पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो। यही कारण राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न किसिमका सुविधासहित स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्न बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ।
स्थानीय तहमा जाने बजेट पहिले कृषि विकास बैंक वा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जम्मा हुने र त्यहाँबाट वाणिज्य बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।
सञ्चित कोष खाता अनिवार्य रूपमा यिनै बैंकमा रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि स्थानीयले खर्च र सञ्चालन खाता अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
शाखा नपुग्दा स्थानीय तहको कारोबारमा समस्या देखिएको छ। बैंक नभएका कारण कर्मचारीको तलबभत्तालगायतका दैनिक आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता स्थानीय तहका कर्मचारीलाई छ। स्थानीय तहमा संचालन गरेका योजना कार्यान्वयनमा समेत समस्या परेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ।
प्रदेश ६ वित्तीय पहुँचमा कमजोर, ७३ मध्ये ५६ स्थानीय तहमा छैनन् बैंकका शाखा
‘सानो आर्थिक कारोवारोदेखि लिएर गाउँपालिकाका योजना, कर्मचारीको तलबभत्ता लिन सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ, यस्तै काममा समस्या परिरहेको छ’, सल्यान सिद्धकुमाख गाउँपालिकाका अध्यक्ष चित्रबहादुर चलाउने गुनासो गर्छन्।
बैंक नहुँदा नागरिक मर्कामा
चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवालले वित्तीय संस्थाहरूले शाखा सञ्चालन नगर्दा स्थानीय तहको काम कारवाहीमा समस्या आएको बताउँछिन्।
आफ्नै नीति आफैँ कार्यान्वयन हुन नसक्ने कारण
राष्ट्र बैंकले सबै स्थानीय तहमा सबै शाखा खोल्न निर्देशनसहित आवश्‍यक सुविधा पनि प्रदान गरेको छ। तर राष्ट्र बैंकका गभर्नर नै सबै स्थानीय तहमा जाऊँ भनेर भन्न नसकिने अवस्था रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन्। राष्ट्र बैंकले अहिले १०९ स्थानीय तहमा शाखा खोल भनेर ताकेता गर्न नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी गराएको हो।
१०९ स्थानीय तहमा न्यूनतम पूर्वाधार (बाटो, बत्ती तथा इन्टरनेट) नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले दबाब दिन नसकेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल बताउँछन्। 'बैंकको शाखाका लागि संचार, सुरक्षा र मानव बस्ती पनि हुनुपर्‍यो, यी पूर्वाधारको चुनौती देखिएको छ’, गभर्नर नेपालले भने, 'यस्तो पूर्वाधार नपुगेका स्थानमा बैंकहरूलाई जबर्जस्ती गरिनेछैन।'
बैंकरहरूले पनि राष्ट्र बैंकले नै दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले न्यूनतम पूर्वाधार नभएको स्थानमा जान नसकिने बताएका छन्। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना वाणिज्य बैंकहरूले प्रतिवद्धता गरेका स्थानमा जति सक्यो छिटो शाखा विस्तार गर्ने तयारी रहेको बताउँछन्। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ६ महिनामा जम्मा २० वटा शाखा विस्तार भएका देखिए तापनि अध्यक्ष ढुंगानाले ६० देखि ७० वटा शाखा विस्तार भइसकेको र अन्य पनि छिटै विस्तारको क्रममा रहेको प्रतिक्रिया दिए।
तर राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार नपुगेका स्थानमा जान दबाब नदिने प्रतिक्रिया दिए पनि यी तहमध्ये कुनै २ मा शाखा विस्तार नगरेसम्म काठमाडौं र ललितपुरमा शाखा विस्तारको अनुमति नदिने जनाएको छ।